Global Voices teny Malagasy » Damaskosy : Ny fandravana ilay tanàna tranainy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Mey 2018 4:25 GMT 1	 · Mpanoratra Yazan Badran Nandika (fr) i Claire Ulrich, Naomy
Sokajy: Syria, Fanoherana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
Mirehareha ho tanàna tranainy indrindra manerantany tsy tapaka mponina i Damaskosy . Nanomboka 8000 taona talohan'ny androntsika ny tantaran'i Damaskosy. Mamintina vanimpotoan-tantara avokoa ny zoron'arabe tranainy ao aminy. Ilay tanàna nifahatra nanoloatra ny zava-drehetra, hatramin'ny horohorontany ka hatramin'ny fanafihana tanatin'ny iray alina taona ka mandraka ankehitriny rahonan'ny nandritra ny folo taona dia mihorohoro noho ny fandrahonana … modernisma!
Sasa avy ao amin'ny tranokalan'ny Syria News Wire  nanangona lahatsoratra maromaro momba ny toe-draharahan'ny tanàna tranainy tao Damaskosy, amin'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny sy ny fikojakojana.
Vinitra tamin'ny tetikasa ireo mpivarotra, nisy fanentanana nandeha tao amin'ny Facebook sy ny sehatra famahanam-blaogy Blogger. Nitarika fanangonan-tsonia  ny fanentanana. Taty aoriandriana nahare siosio tamin'ny volavola ny mpanao gazety ka nanjary raharaha iraisampirenena  izany. Avy eo, nipoaka ny baomba: volana vitsivitsy talohan'ny nahalasa an'i Damaskosy ho Renivohitry ny Kolontsaina Arabo nandritra ny herintaona, nandrahona ny hanala an'i Damaskosy tranainy amin'ny Vakoka Manerantany ny UNESCO raha tsy manao zavatra bebe kokoa hiarovana ny tanàna tranainy.
Bab al-Faradis , al-Amara, Damaskosy
Ny fizarana faharoa indray natokana ho amin'ny asam-panavaozana ny lalana Medhat Pasha (adika ara-bakinteny hoe lalana “antsoina imahitsy” ), lava indrindra sady iray amin'ny ela indrindra ao Damaskosy tranainy. Manaiky ny tsy maintsy hanaovana ny asa i Sasa satria efa ela no simba ny lalana fa malahelo amin'ny nampandamoka ny fifandaminana sy ny fanoloana tsy nisy fanavahana ny ampahany lehibe ara-kolontsaina amin'ny tsena taloha, tahaka ny tafo vita amin'ny vifotsy naorina nandritra ny vanim-potoana Ottoman, izay manana dikany manokana:
Ny fizarana fahatelo  indray mitondra antsika ho any amin'ny vohitra fahagolan'i Saroujah, izay efa nandalovana fanamboarana andiam-panorenana tsy misy fanahy. Nahantona ny tetikasa handamaka izy sisa tavela tamin'ilay vohitra fahagola. Mbola mihantona ny fanapahan-kevitra hanohizana na tsia, hoy i Sasa nanoratra:
Sary navoaka nomen'i Sasa  alalana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/27/120117/
 lalana “antsoina imahitsy”: http://en.wikipedia.org/wiki/Street_Called_Straight